अन्तर्वार्ता/विचार शनिबार, कात्तिक २, २०७६
सरकारले हतारमा ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव वेलबासे भन्छन्, “मापदण्ड पूरा भएको छ, हतारिएर घोषणा गरेको होइन।”
किन हतारमा ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नुभयो ?
पहिला हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरे । त्यसपछि जिल्लास्तरमा घोषणा गरियो । ७७ जिल्लाले नै खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि त देश स्वतः खुला दिसामुक्त भयो नि ! त्यसैले सबै मापदण्ड पूरा गरेर घोषणा गरिएको हो ।
सबै घरमा शौचालय नै नभएको अवस्थामा खुला दिसामुक्त घोषणाले के अर्थ राख्छ ?
सबै घरमा शौचालय छैनन् भनेर कसले भन्यो ? हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले घोषणाअघि आफ्नो मापदण्ड पूरा गरेका छन् । तिनले शौचालय नै नभई घोषणा गरेका होइनन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला तहबाट पटकपटक अनुगमन भएको छ । अनुगमनबाट आएको सूचनाका आधारमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।
जम्मा घरधुरी संख्याको आधामा पनि शौचालय नरहेको समाचार आएका छन् नि ?
केही पत्रपत्रिकाले नेपालमा एक करोड ४८ लाख घरधुरी भएको भन्दै समाचार लेखे । तर, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । कुल जनसंख्या नै करीब तीन करोड छ भने घरधुरी संख्या एक करोड ४८ लाख कसरी हुन्छ ? एक घरमा पाँच जना सदस्यको अनुपातमा हिसाब गर्दा ५५/५६ लाखभन्दा बढी घरधुरी संख्या हुँदैन । पुरानो तथ्याङ्क अनुसार ५८ लाख शौचालय बनिसकेका छन् । अहिले यो संख्या बढेको छ ।
सार्वजनिक शौचालयको अवस्था नै राम्रो छैन; बटुवाहरू शौच गर्न कहाँ जाने ?
खुला दिसामुक्त घोषणालाई हामीले सार्वजनिक शौचालयसँग जोडेर हेरेका छैनौं । सार्वजनिक शौचालयमा केही समस्या छन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको हो । त्यसमा पनि विस्तारै सुधार आउँछ ।
यी कमि–कमजोरी सुधार नगरी खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा हतार गरेकै देखियो नि ?
हतार गरेको हुँदै होइन, मापदण्ड अनुसार घोषणा भएको छ । जो कसैले यसको तथ्य जाँच गर्न सक्छ ।